မိတ်ဆွေတွေ သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ အမြဲခင်မင်နေစေတဲ့အချက်တစ်ခုဆိုရင် ...? မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ ဘာကိုဖြေချင်မလဲ မသိပေမယ့် ကျွန်တော့် အယူအဆလေးတစ်ခုကို ပြောချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ရိုးသားပွင့်လင်းဖို့ပဲလို့ ဖြေလိုက်ချင်ပါတယ်။ ရိုးသားခြင်းလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ လူတွေက "ရိုးဂုဏ်ကို ထိန်းကွာ" "ရိုးသားခြင်းကသာ အောင်မြင်မှုကို ရရှိနိုင်တယ်" "ရိုးရိုးသားသား လုပ်ကိုင်စားပါကွာ"စတဲ့စကားလုံးကို ကြားဖူးနေပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ရိုးသားခြင်းက ဘာတွေအတွက် လိုအပ်သလဲ။ ဒီနေရမှာ ကျွန်တော်တစ်ခုပြောပြချင်တာကတော့ လ
🔊🔊 မင်္ဂလာပါ 🥰 အခုလို ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ကာလမှာ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေပြေရှိနေနိုင်ကြပါစေလို့ ပထမဦးစွာ ဆုမွန်ကောင်းပို့သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ အိမ်မှာနေရတဲ့ အချိန်ကာလလေးမှာ နေ့ရက်တိုင်းကို အကျိုးရှိရှိ ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ဆိုတာ အင်မတန်မှ အရေးကြီးလှပါတယ်။ ဒီလို အချိန်ကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချပြီး အောင်မြင်တဲ့ နေ့ရက်လေးတွေ ဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်မတို့ YSE officers တွေ အသုံးချနေတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကို မျှဝေပေးပါရစေ။ (၁) ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရမည့်အရာ (၃) ခုကို သတ်မှတ်ပါ “ဒီနေ့ ညအိပ်ရာမ၀င်ခင် ပြီးမြ
လူတိုင်းမှာ အိပ်မက်တွေ ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ ဒီအိပ်မက်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ အသက်ရှင်သန်ရတဲ့အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွက် အရမ်းကို အားကြီးလွန်းတဲ့ဆန္ဒတစ်ခုပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ အချို့လူတွေ အိပ်မက်တော့ ရှိတယ်။ ထိုအိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး အိပ်မက်တွေဟာ ပြောင်းသွားကြပါတယ်။ အိပ်မက်ကို အိပ်မက်အတိုင်း ထားတာထက် အကောင်အထည်ဖော်လိုက်တဲ့အခါ ရရှိလိုက်တဲ့ ကြည်နူးမှု၊ ပီတိတွေဟာ နောက်ထပ် နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက် အားအင်တွေဖြစ်သလို အခက်အခဲတွေ ဆင်းရဲဒဏ်တွေ ဒုက္ခဒဏ်တွေကို ပိုမိုသည်းခံနိုင်စွမ
သင့်ကိုယ်သင် digital skill နှင့်ပတ်သတ်ပြီး အားနည်းနေသေးတယ်လို့ယူဆမိပါသလား? ဒါဆိုရင်တော့ YSE ရဲ့ Digital Skill Training ကိုတက်ရောက်ရန် ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ YSE မှ သင့်အတွက် အခြေခံလိုအပ်‌နေတဲ့ Digital Skill‌ တွေကိုသင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ YSE မှပြုလုပ်မည့် Digital Skill Trainingနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ဘာတွေသင်ပေးမှာလဲ? လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ ပညာရေးကဏ္ဍမှာ အဓိကလိုအပ်တဲ့ Essential Digital Toolsများဖြစ်ကြသည့် Gmail and Google Drive Google docs Google Sheets Google Slides Google forms တွေရဲ့အသုံးပ
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းလာချင်တယ်ဆိုရင်... မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေ ပေါများလာချင်တယ်ဆိုရင်... သင်ခန်းစာတွေကို အချိန်တိုတိုနဲ့ အကျိုးရှိအောင်လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်... ငွေအကုန်အကျနည်းနည်းနဲ့ ခရီးရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်... သင်ဟာ Digital Technology ကို လေ့လာသင့်နေပါပြီ။ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ယနေ့ YSE ကနေ မိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ ယနေ့ခေတ်မှာ နေရာကဏ္ဍပေါင်းစုံမှာ အဓိက အသုံးဝင်နေတဲ့ နည်းပညာအကြောင်းကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့် ရရှိနိုင်မယ့် အကျိုးကျေးဇူး ၅ ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုဆက်သွယ်ရေး ဆိုရှယ